Qodista Macdanta Dredge Waxay Kordhisaa Wax Soosaarka Cusbada Shiinaha - Ellicott Dredges
Dredge waxay kordhisay wax soo saarka milixda Shiinaha "Mashruuca Macdanta Xingjiang Salt Lake Dredge," Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha
Waxaa laga yaabaa 3, 2008
Gobol fog oo woqooyi-galbeed Shiinaha ah, macdanta cusbada ku jirta Mirabilite waxay ka bilaabatay 1958, iyadoo la taageerayo tuulo yar. Warshadda Kiimikada ee Xingjiang Salt Lake, oo ku taal Gobolka Xingjiang ee Shiinaha, waxay ku taal qiyaastii 70 km bariga magaalada Urumqi. Macdanta waxaa markii hore lagu sameeyay dhabarka dambe waxaana lagu quudiyey warshad yar oo wax soo saarta. Mirabilite ka sokow, cusbada kale waa la soo saaray oo waxaa loo isticmaalay warshadaha ganacsiga Shiinaha.
Ka shaqeynta Xingjiang Salt Lake Chemical Co. Plant
1980-yadii warshadaha qodaya waxay bilaabeen inay helaan boos ay ku siinayaan qodaxyada baaldiga ee soo saarista warshadaha macdanta. Bartamihii 1980-yadii, iyadoo gacan ka heleysa Xafiiska Ganacsiga Dibadda ee Shiinaha, wadahadallo waxaa laga bilaabay shirkadaha kale ee wax soosaara, iyo Ellicott® Caalami, si ay u siiso hay'adda Shiinaha biyo xireen.
Ellicott® International waxay awood u yeelatay inay u muujiso Shiinaha guushiisa mashaariic la mid ah Xingjiang Project, sida FMC Corp.'s Green River, Wyoming USA Potash Mine; Macdanta Francana 'Mine Salt Mine; Mineracao Taboca ee Min Mine ee Brazil; Marcopper-ka Filibiin oo leh dabada naxaasta ah; iyo Elliana oo ku taal Israel, macdanta cusbada / potash. Dhammaantood way guuleysteen oo waxay isticmaaleen Ellicott®'Brand Brandet Baaldiyeel Dredges Macdanta Cusbada.
Mas'uuliyiinta Shiinaha waxay gaareen go'aan ah inay ku iibsadaan mid ka mid ah mashruucooda milixda laga qodayo. Horraantii 1990kii Shirkadda Kiimikada Xingjiang Salt Lake Chemical ayaa qandaraas la gashay shirkadda Ellicott® Caalami ah in la siiyo Hal B-890 Bucketwheel Salt Mining Dredge. Imaatinka qulqulaha ayaa bixiyay laba adeeg: (1) waxay dib ugu heshay Mashruuca Xingjiang cagaheeda, iyo (2) waxay soo bandhigtay Ellicott® noocyo caan ah oo laga galo Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha.
Cusbada Macdanta ee Xingjiang Salt Lake Chemical
Isla markii uu warku soo gaadhay in wax soo saarka cusbada ee Xingjiang ay kor u kacday ku dhowaad 100%, hoggaamiyeyaasha kale ee gobolka ayaa bilaabay inay yimaadaan macdanta milixda si ay u indha indheeyaan hawlgalka qoditaanka. Waxay bilaabeen inay arkaan sida loola jaanqaadi karo qalabkan macdanta baahidooda, waxayna wadahadal kula jiraan Ellicott® Caalami ku saabsan qodista dheeriga ah ee qodista Shiinaha.
Waxaa laga daabacay Macdanta & Dhisidda Daadinta Adduunka